April 20, 2018 April 20, 2018 Yoma Lan
အမေးအများဆုံး လိင်ပုိုင်းဆုိုင်ရာမေးခွန်းတွေကုို ဖြေကြားပေးခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး အပြာမင်းသမီး Mia Khalifa
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေ့လာနိုင်တဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်သူ့အကူအညီကိုမလိုအပ်ဘူး ။ဒါပေမယ့်လည်း လိုအပ်လာပြီးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းချင်တဲ့သူနှစ်ယောက်ရှိပါတယ် ။ပထမတစ်ယောက်ကတော့ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသား ပုပ်ဖရန်စစ်ပဲဖြစ်တယ် ။ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေဟာ အချစ်ကိစ္စမှာနာမည်ကြီးကြတယ် ။ဒုတိယတစ်ယောက်တော့ Mia Khalifa ပါပဲ ။ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူဟာ အပြာမင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ဆိုးသွမ်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လောက်တော့စမ်းကြည့်ဖူးတဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ ။ ကံကောင်းတာကတော့ ကျွန်တော်မေးမယ့်မေးခွန်းတွေကို Mia Khalifa က ဖြေပေးပြီးသားဖြစ်နေတာပါပဲ ။Mia ဟာ Men’s Health အင်တာဗျူးမှာ လိင်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဂူးဂဲမှာရှာဖွေမှုအများဆုံးမေးခွန်းတွေကိုဖြေကြားပေးသွားပါတယ် ။ သူဖြေသွားတာတွေကတော့ အခုလိုပါပဲ ၁. Gspot ဆိုတာဘာလဲ Gspot ဟာ အမျိုးသမီးအင်္ဂါအပေါ်ဘက်မှာရှိပြီးတော့ သားအိမ်ခေါင်းအဝနဲ့ အမျိုးသမီအင်္ဂါအပေါက် အကွာအဝေးကြားတစ်ဝက်လောက်မှာရှိပါတယ် ။Gspot ဟာ အခွံမာသီးတစ်ခုလို ခပ်ကြမ်းကြမ်းအနေအထားရှိတဲ့အတွက်သင်ထိမိရင်သိပါလိမ့်မယ် ။ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အချိန်မှာပြီးမြောက်တာမျိုးသိပ်မရှိပါဘူး ။အမျိုးသမီးအင်္ဂါစေ့ နဲ့ Gspot ကို ကစားပေးမှသာ ပြီးမြောက်စေတယ် ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတိုင်းကတော့မတူကြပါဘူး ။ ၂. အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပြီးမြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဒါကတော့ အရာအများစုပေါ်မူတည်ပါတယ် ။နမ်းရှိုက်ခြင်း နဲ့ အစပျိုးခြင်း တချို့အခြေအနေမျိုးမှာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပြုမူခြင်း ဒါတွေကတော့ အမျိုးသမီးတွေပေါ်မူတည်ပါတယ် ။အစပျိုးတာဆိုတာလည်းအများကြီးလုပ်နေဖို့မလိုပါဘူး ။ဒီအပူကို ခံစားဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ် ။Mia ဟာ ဆူညံသံတွေကလည်းအဓိကအချက်လို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ် ။သူညည်းနေတယ်ဆိုရင် သူကျေနပ်လို့ပေါ့ ။တကယ်လို့ သူတုန်လာပြီဆိုရင်တော့ ဒါမှမဟုတ် နတ်ပူးသလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ဒါကသူ ပြီးဖို့နီးစပ်လာပြီဆိုတဲ့သဘောသက်ရောက်တယ်။ ၃. အမျိုးသားလိင်အင်္ဂါအရွယ်အစားက အရေးပါလား ကျွန်မကတော့ အရွယ်အစားက အရေးပါလွန်းတယ်လို့မထင်ဘူး ။ကျွန်မအတွက်ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံး…
သေချင်လောက်အောင် ဆိုးနေတဲ့ကံကို ပြုပြင်နည်း
သေချင်လောက်အောင်ထိ ဆိုးနေတဲ့ကံကို ကုသိုလ်၅-မျိုးနဲ့ ပြုပြင် ယူလို့ရပါတယ်။ တိုက်တွန်းစကားအနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ သေချင်လောက်အောင် ဆိုးနေတဲ့ကံကို ကုသိုလ် ၅မျိုးနဲ့ နေ့စဉ်ပြုပြင် ပစ်လိုက်စမ်းပါ။ ဆိုးနေတဲ့ကံ ” နင်နေ ငါသွား ” ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကုသိုလ် ၅မျိုးကတော့… ၁။ ဒါန ၂။ သီလ ၃။ ဂုဏ်တော် ၄။ မေတ္တာ ၅။ ၀ိပဿနာတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကုသိုလ် ၅မျိုးကို နေ့စဉ် ဖြစ်စေရမယ်လို့ အဓိဋ္ဌာန်ပြီး နေ့စဉ် ပြုလုပ် သွားဖို့ပါပဲ။ ၉။ ငါးမျိုးကုသိုလ် ဘယ်လိုပြုရမယ်။ ၉-၁။ ဒါန ပထမဆုံးကုသိုလ်က ဒါန ပါ။ ဒါနဆိုတဲ့နေရာမှာ ရှင်၁သောင်းပြုပေးနိုင်မှ။ ကျောင်းကြီးတွေ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းနိုင်မှ ဒါန မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်မှာရှိတဲ့ ဘုရားကို ရေချမ်း ကပ်လိုက်မယ် ဆိုလည်း ဒါန ဖြစ်သွားတာပါပဲ။ နောက် ကိုယ်ထမင်းချက်မယ့် ဆန်ထဲက လက်တစ်ဆုတ်စာလောက်နှိုက်ပြီး အိမ်ရှေ့က စာကလေးတွေ ခိုကလေးတွေကို ပစ်ကျွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ဒါနဖြစ်သွားတာပါပဲ။ ဆန်လက်တစ်ဆုတ် လောက်နဲ့တော့ မိသားစု ထမင်းဝိုင်းကို သိပ်ပြီးလည်း မထိခိုက်စေပါဘူး။ နေ့စဉ် လက်တစ်ဆုတ် စာလောက် စာကလေးတွေကို ကျွေးနေမယ် ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ဝန် ကိုယ့်အားနဲ့ မျှတဲ့ ဒါန ဖြစ်နေတာပါ။ ၉-၂။ သီလ…
မန္တလေးက ကိုရင်လေး ဓမ္မပါလ ရဲ့ သီလပေး တရားဟောနေတဲ့.. တရားပွဲ ဗွီဒီယိုဖိုင်ပါ..
April 19, 2018 April 19, 2018 Yoma Lan
မန္တလေးက ကိုရင်လေး ဓမ္မပါလ ရဲ့ သီလပေး တရားဟောနေတဲ့.. တရားပွဲ ဗွီဒီယိုဖိုင်ပါ.. အောက်မှာ ဗွီဒီယိုဖိုင် ၂ ခု တင်ပြပေးထားပါတယ်… ကိုယ်ရင်လေးမယ်တော် ခမည်းတော်များ အတော်ဝမ်း သာမည့်မြင်ကွင်းလေးပါ။ သားကောင်းသမီးမြတ်ဆိုတာ ဒီဘက်ခေတ်မှာ တမိပေါက် တစ်ယောက်တောင်မထွန်းကားကြတော့ပါဘူး ကိုယ်ကျင့်သီလပြည့်စုံသူမိဘများရဲ့ ရင်သွေးရတနာသည် အမြင့်မြတ်ဆုံးသောဘ၀၌စံမြန်ရလေသည်။ မိဘသေလွန်သော်လည်း ရွှေထီးဆောင်း၍ မြင့်မြတ် သောဘုံဌာန၌ခံစားရလေသည်။ ကိုရင်သာမဏေကို သာမန်လူမပြောနှင့် လေးကျွန်းလုံးကို အစိုးရသည့် စကြာမင်း ကတောင် ထိုင်ရှိခိုးရတယ် (တောင်ပုလုကမ္ဘာအေးဆရာတော်ဘုရားကြီး သြဝါဒ) ============= ကိုယျရငျလေးမယျတျော ခမညျးတျောမြား အတျောဝမျး သာမညျ့မွငျကှငျးလေးပါ။ သားကောငျးသမီးမွတျဆိုတာ ဒီဘကျခတျေမှာ တမိပေါကျ တဈယောကျတောငျမထှနျးကားကွတော့ပါဘူး ကိုယျကငျြ့သီလပွညျ့စုံသူမိဘမြားရဲ့ ရငျသှေးရတနာသညျ အမွငျ့မွတျဆုံးသောဘဝ၌စံမွနျရလသေညျ။ မိဘသလှေနျသျောလညျး ရှထေီးဆောငျး၍ မွငျ့မွတျ သောဘုံဌာန၌ခံစားရလသေညျ။ ကိုရငျသာမဏကေိုသာမနျလူမပွောနှငျ့ လေးကြှနျးလုံးကို အစိုးရသညျ့ စကွာမငျး ကတောငျ ထိုငျရှိခိုးရတယျ (တောငျပုလုကမ္ဘာအေးဆရာတျောဘုရားကွီး သွဝါဒ) န္တလေးက ကိုရင်လေး ဓမ္မပါလ ရဲ့ သီလပေး တရားဟောနေတဲ့.. တရားပွဲ ဗွီဒီယိုဖိုင် ၂ ခုပါ.. ဒီပို့လေးကို တွေ့မြင်ပြီး ကိုရင်လေးရဲ့တရားကို နာကြားရသူတိုင်း ရှယ်လုပ်ပြီး ပြန်လည်မျှဝေပေးစေလိုပါတယ် ခင်ဗျာ…။ ဗွီဒီယိုဖိုင်
April 19, 2018 Yoma Lan
ဒူးဒဏ်ရာခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်သော်လည်း ခြောက် လခန့် အနားယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းလိဂ်တွင် ကစားနေသည့် မြန်မာတိုက်စစ်မှူး ကျော်ကိုကိုက ပြောသည်။ ဧပြီ ၇ရက်က ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းရွိုင်မြို့ရှိ Singha ကွင်း၌ ယှဉ်ပြိုင်သည့် အိမ်ရှင်ချင်းရွိုင်အ သင်းနှင့် ပတ္တရားအသင်းတို့ပွဲတွင် ဒုတိယပိုင်းပွဲချိန် ၇၆မိနစ်၌ ကျော် ကိုကိုသည် ပြိုင်ဘက်နောက်ခံက စားသမားနှင့် ထိခိုက်မိကာ ညာ ဘက်ဒူးအရွတ်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ သည်။ ကျော်ကိုကို၏ ဒူးဒဏ်ရာကို ဧပြီ ၁၃ ရက်က ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ရှိ Sriphat Medical Center ဆေးရုံ၌ ခွဲစိတ်ကုသခဲ့သည်။ ‘‘ဆရာဝန်ကတော့ ခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့် ကို ခြောက်လလောက်နားပြီးရင် ပြန်ကစားလို့ရပြီလို့ပြောပါတယ်။ ဒဏ်ရာက နည်းနည်းပြင်းတယ်၊ ဒူးအရွတ်ပြတ်သွားတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။ အခုတော့ ခွဲထားတဲ့ အရှိန်ကြောင့် လမ်းကောင်းကောင်း မလျှောက် နိုင်သေးပါဘူး။ ဒီလာမယ့်် ၂၄ ရက်နေ့ဆို ဆေးရုံမှာ ထပ်ပြရ မယ်။ ကုသမှုကိုတော့ အသင်းက အားလုံးတာဝန်ယူပေးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတော့ မပြန်ဖြစ်ပါဘူး။ ဒီ (ထိုင်း) မှာပဲ ဒဏ်ရာကို လိုအပ် တဲ့ ကုသမှုတွေ ဆက်လုပ်သွားမှာ ပါ’’ ဟု ကျော်ကိုကိုက ပြော သည်။ ကျော်ကိုကို၏ ဒဏ်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းဆုံးခြောက် လမှ ရှစ်လခန့်အထိ ကုသရန်…
ဒူးဒဏ်ရာခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်သော်လည်း ခြောက် လခန့် အနားယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းလိဂ်တွင် ကစားနေသည့် မြန်မာတိုက်စစ်မှူး ကျော်ကိုကိုက ပြောသည်။ ဧပြီ ၇ရက်က ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းရွိုင်မြို့ရှိ Singha ကွင်း၌ ယှဉ်ပြိုင်သည့် အိမ်ရှင်ချင်းရွိုင်အ သင်းနှင့် ပတ္တရားအသင်းတို့ပွဲတွင် ဒုတိယပိုင်းပွဲချိန် ၇၆မိနစ်၌ ကျော် ကိုကိုသည် ပြိုင်ဘက်နောက်ခံက စားသမားနှင့် ထိခိုက်မိကာ ညာ ဘက်ဒူးအရွတ်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ သည်။ ကျော်ကိုကို၏ ဒူးဒဏ်ရာကို ဧပြီ ၁၃ ရက်က ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ရှိ Sriphat Medical Center ဆေးရုံ၌ ခွဲစိတ်ကုသခဲ့သည်။ ဆရာဝန်ကတော့ ခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့် ကို ခြောက်လလောက်နားပြီးရင် ပြန်ကစားလို့ရပြီလို့ပြောပါတယ်။ ဒဏ်ရာက နည်းနည်းပြင်းတယ်၊ ဒူးအရွတ်ပြတ်သွားတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။ အခုတော့ ခွဲထားတဲ့ အရှိန်ကြောင့် လမ်းကောင်းကောင်း မလျှောက် နိုင်သေးပါဘူး။ ဒီလာမယ့်် ၂၄ ရက်နေ့ဆို ဆေးရုံမှာ ထပ်ပြရ မယ်။ ကုသမှုကိုတော့ အသင်းက အားလုံးတာဝန်ယူပေးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတော့ မပြန်ဖြစ်ပါဘူး။ ဒီ (ထိုင်း) မှာပဲ ဒဏ်ရာကို လိုအပ် တဲ့ ကုသမှုတွေ ဆက်လုပ်သွားမှာ ပါ’’ ဟု ကျော်ကိုကိုက ပြော သည်။ ကျော်ကိုကို၏ ဒဏ်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းဆုံးခြောက် လမှ ရှစ်လခန့်အထိ ကုသရန်…
၂၀၁၉ တက္ကသိုလ် ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းလွှာကို အလွတ်ကျက်မှတ်မှုကို အားပေး သည့် မေးခွန်းပုံစံအစား စဉ်းစား တွေးခေါ်မှုကို အားပေးသည့် မေး ခွန်းပုံစံသို့ ပြောင်းလဲစစ်ဆေးရန် စီစဉ်နေသည်ဟု ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးက ပြော ကြားသည်။ ဒီချုပ်အစိုးရသက်တမ်း ဒုတိယနှစ်အတွင်း ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ဆောင်ရွက်ချက် များကို ရှင်းလင်းတင်ပြရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ယင်းသို့ ထည့်သွင်းပြောကြားကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင်နှစ် တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို သင် ရိုးသစ်မပြောင်းလဲဘဲ လက်ရှိ သင်ရိုးအတိုင်း သင်ကြားမည်ဖြစ် ပြီး စာမေးပွဲမေးခွန်းကိုသာ စဉ်း စားတွေးခေါ်မှု ဦးစားပေးသည့် မေးခွန်းပုံစံသို့ ပြောင်းလဲမည်ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။ ၂၀၁၈ ကစကာ တက္ကသိုလ် ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းပုံစံ အနည်း ငယ် ပြောင်းမည်ဖြစ်ပြီး တွေးခေါ် မြော်မြင်နိုင်မှု အားပြုသော မေးခွန်းများ ပိုမိုထည့်သွင်းခြင်း ဖြင့် မေးခွန်း၏ အနှစ်သာရ မြင့် မားလာနိုင်သည်ဟု ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၁၇ သြဂုတ် တွင် ကြိုတင်ကြေညာခဲ့သည်။ မတ်လက ကျင်းပခဲ့သည့် ၂၀၁၈ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အင်္ဂလိပ်စာမေးခွန်းတွင် အနည်း ငယ် စတင်ပြောင်းလဲပြီး အခြေ ခံအားနည်းသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အခက်တွေ့ခဲ့ရ သည်ဟု…